Yan Aung: 2009
‘Call’ ဆိုတဲ့ ခလုတ်လေးပေါ်မှာ
အနုပညာဆိုင်ရာနှင့် သုတ ဘလော့ဂ်တွေသိရင် ပြောပြပေးပါ
ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းချီ၊ Graphic Art စသည်ဖြင့် အနုပညာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ဘလော့ဂ်တွေ၊ ဆိုက်တွေ သိသလောက်လေး ကျွန်တော့်ကို ပြောပြပေးလို့ရမလား.
နောက်တစ်ခုကတော့ သုတပိုင်းဆိုင်ရာတွေ၊ မြန်မာ့သမိုင်း၊ ကမ္ဘာ့သမိုင်း လိုမျိုးတွေကို ရေးတဲ့ ဘလော့ဂါတွေရော ရှိလား. ဆိုလိုတာက General Knowledge တွေလည်းဖြစ်နိုင်သလို သမိုင်းကြောင်းနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေကို ရေးတဲ့ဘလော့ဂ်တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.
မြန်မာလူငယ်လူကြီးတွေ ရေးထားတဲ့ဆိုက်တွေပေါ့ဗျာ. အဲဒါတွေကို Organize လုပ်ချင်လို့ပါ. ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ၁၀ ခုကျော်မကျော် သိချင်လို့ပါ.
အားလုံးပဲ ကြိုပြီး ကျေးဇူးတင်ထားလိုက်မယ်.း)
ကထိန် အလှူငွေ စာရင်းရှင်းတမ်းနှင့် အလှူရှင်များစာရင်း
ကထိန်အလှူအတွက် အလှူငွေစာရင်းရှင်းတမ်း ရရှိပြီ ဖြစ်လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.
အကျဉ်းချုပ်ပြောရရင်တော့ နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူငွေစုစုပေါင်းကတော့ ၁,၆၆၉,၄၅၅ ကျပ် (၁၆ သိန်း ၆ သောင်း ၉ ထောင် နှင့် ၄ ရာ ၅၅ ကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်.
ပဒေသာပင်ဆင်ယင်ခြင်း၊ ကထိန်အကြိုနေ့ အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း၊ အလှူနေ့ အကျွေးအမွေး၊ လပြည့်ဝန်းလမ်းသွယ် အတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းခြင်းနှင့် ပို့/သယ် စရိတ်များ အားလုံးပေါင်းမှာ ၁,၆၅၅,၉၃၀ ကျပ် (၁၆ သိန်း ၅ သောင်း ၅ ထောင် နှင့် ၉၃၀ ကျပ်) ဖြစ်ပါတယ်.
ပိုငွေ ၁၃၅၂၅ ကျပ်ကို ဦးဇင်း ဦးကောဝိဒထံ ကထ်ိန်ပဒေသာပင်အတွက် န၀ကမ္မအလှူတော်ငွေအဖြစ် ၂၀-၁၀-၂၀၀၉ မှာ ကပ်လှူခဲ့ပြီး ဖြစ်ကြောင်းလည်း အားလုံးကို ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါတယ်.
ဒါကတော့ အလှူရှင်များ စာရင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
၁.နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ စံ + နုနု မိသားစု (ဂျပန်)မှ ပန်းကန် အချပ် ၅၀ + ဇွန်း + ပဋိပဒစာအုပ်များအတွက်စုစုပေါင်း အလှူငွေ ( ၁၂၀၀၀၀ ကျပ် )
၂.နှစ်ဘက်သော မိဘများအား အမှူးထား၍ စံ + နုနု မိသားစု (ဂျပန်)မှ ကထိန်သင်္ကန်း + ကထိန်ပဒေသာပင် အတွက်စုစုပေါင်း အလှူငွေ (၅၅၅၀၀ ကျပ် )
၃.ဒေါ်ယဉ်ယဉ် (လယ်ဝေးမြို့) (စာဖတ်သူ- ဂျပန်) မှ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီး အတွက် အလှူငွေ ( ၄၁၅၀၀ ကျပ်)
၄.ညီမလေးခွန်းသဒ္ဒါ (ဂျပန်)မှ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးအတွက် အလှူငွေ (၄၁၅၀၀ ကျပ် )
၅.ကိုလှအောင်+မထားထားမြင့်မိသားစု(ဂျပန်)မှ ညီမလေးထားထားမြင့်ရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် ကထိန်သင်္ကန်းအတွက်အလှူငွေ ( ၄၁၅၀၀ ကျပ်)
၆.ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏ် + ဒေါ်ဝါ၀ါခိုင်မင်း ၊ သမီးလေးမေမြတ်နိုးခိုင် မိသားစု ( ဂျပန်)မှ တိုင်ကပ်နာရီ တစ်လုံး ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း------------------------------------= (၃၀၀၀၀၀ ကျပ်)
( ဂျပန်နိုင်ငံမှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ငွေကျပ် သုံးသိန်းတိတိ လွှဲပြီး )
၁.ကိုသုခ-မေကဆုန်(စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက်အလှူငွေ (၂၂၉၅၀ ကျပ် )
၂.ညီမလေးမေသူ(စင်္ကာပူ)မှ သင်္ကန်း ၊ပရိက္ခရာအစုံအတွက် အလှူငွေ ( ၇၆၅၀၀ ကျပ် )
၃.ညီမလေးဥမ္မာသန့် (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက်အလှူငွေ( ၂၂၉၅၀ ကျပ် )
၄.ညီမလေးခင်သန္တာထွေး (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက်အလှူငွေ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅၀၀၀၀ ကျပ်
၅.မေပျိုတစ်စု (စင်္ကာပူ)မှ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းအတွက် အလှူငွေ ၅၄၈၀၅ ကျပ်
၆.ညီမလေးနှင်းဟေမာ (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက်အလှူငွေ (၃၈၂၅၀ ကျပ်)
၇.ညီမလေးစိမ်း (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေ ( ၃၈၂၅၀ ကျပ်)
၈.ညီမလေးsweetpeony (စင်္ကာပူ)မှ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းအတွက် အလှူငွေ (၃၀၆၀၀ ကျပ်)
၉.မသန္တာဝင်း (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေ (၂၂၉၅၀ ကျပ်)
၁၀. မမိုးမမ (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေ ( ၃၈၂၅၀ ကျပ်)
၁၁.အလှူရှင်တစ်ဦး (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေ( ၇၆၅၀၀ ကျပ်)
၁၂.ညီမလေးဝိုင်း (စင်္ကာပူ)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေ (၃၈၂၅၀ ကျပ်)
၁၃.ကွယ်လွန်သူ..မေမေဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း ရည်စူး၍့ သားသမီးတစု ကောင်းမှူ့ .ကိုအောင်အောင်ဖြိုး+မစုစုဦး ၊ ကိုအောင်မြင်ဝင်း+မသစ်သစ်ထူး ( ၇၆၅၀၀ ကျပ်)
၁၄.ဦးဘိုနီ + ဒေါ်ခင်ခင်မိသားစု (စင်္ကာပူ)မှ ( ၃၀၆၀၀ ကျပ်)
စင်္ကာပူမှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက် အလှူငွေစုစုပေါင်း-------------------------------------= ၆၁၇၃၅၅ ကျပ်
ကိုရဲကျော်+ မမေမိုး ( စင်္ကာပူ)မှ (၃၀.၁၀.၀၉) နေ့ဆွမ်းအတွက် အလှူငွေ ( ၇၆၅၀၀ ကျပ် )
စင်္ကာပူမှ အလှူငွေ စုစုပေါင်း ( ၆၉၃၈၅၅ ကျပ် )တိတိ လွှဲပြီး
၁.shwedarling team .(shwedarling.com)မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက်အလှူငွေ ၄၅၀၀၀ ကျပ် (မြန်မာပြည်သို့လွှဲပြီး)
၂.ညီမလေးပန်းရင့်ရောင် (မြန်မာပြည်) မှ ကထိန်ပဒေသာပင်အတွက်အလှူငွေ ၃၀၀၀၀ ကျပ် ( ငွေလွှဲပြီး)
မြန်မာပြည်မှ အလှူငွေ ပေါင်း----------------------------------- = ( ၇၅၀၀၀ ကျပ် ) (လွှဲပြီး)
၁.ကိုမောင်ဇော်မင်းမိသားစု (USA)မှ သင်္ကန်းပရိက္ခရာတစ်စုံအတွက်အလှူငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀ (US$70)
၂. ဦးကြံအောင် (USA) မှ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးအတွက် အလှူငွေ US $ 35
၃. မနှင်းပေါက်ပွင့် (UAE) မှ ကထိန်ဝေယျာဝေစ္စအတွက် အလှူငွေ မြန်မာငွေ 80,000 ကျပ်
၄. ကိုထွန်းအောင်ဝင်း (Japan) မှ ပရိက္ခရာ ရှစ်ပါးနှင့် ကထိန်ဝေယျာဝစ္စအတွက် မြန်မာငွေ ကျပ်တစ်သိန်း
၅. ကိုအောင်ဖြေအေး (Bowling Green, Kentucky, USA) မှ ကထိန်ဝေယျာဝစ္စအတွက် US $ 32
၆. အမေရိကန်နိုင်ငံ နယူးယောက်မြို့နေ ကိုကျော်ဇေ+မသဇင်ဝင်းနှင့် သမီးငယ်လေး Angel Rose Latt တို့မှ ကထိန်ဝေယျာဝစ္စအတွက် US $ 50
၇. ထိုင်ဝမ်မှ မသန္တာက ကထိန်အတွက် ပရိက္ခရာရှစ်ပါးနှင့် ဝေယျာဝစ္စအလှူငွေ မြန်မာငွေ ၈ သောင်းကျပ်
၈. ဘလော့ဂါရန်အောင်မိသားစု(USA)ကထိ်န်ဝေယျာဝစ္စအတွက် US $ 100
ကထိန်ရေစက်ချ တရားနာအစီအစဉ်ကို ဒီနေရာလေးမှာ တိုက်ရိုက်ကြည်ညိုနိုင်ပါတယ်...
တစ်ချို့လည်း သိပြီး ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်. မ၀ါဝါခိုင်မင်းတို့ဆိုက်မှာတင်မက ဦးကောဝိဒကလည်း မက်ဆေ့ခ်ျတင်ထားတာကို ဖတ်ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်.
ပြန်ရောက်တာ နောက်ကျလို့ ကျွန်တော့်ဖက်က အဆက်အသွယ်ပြတ်သလို ဖြစ်သွားတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး. ရေစက်ချ တရားနာတာကို မမှီလိုက်ပေမယ့်လည်း ကထိန်ပဒေသာပင်တွေဖက်ကို ကင်မရာ ချိန်ထားဆဲ ဖြစ်တာမို့ မိမိတို့ရဲ့ အလှူဒါနလေးများကို ကြည်ညိုသဒ္ဒါ ပီတိဖြာနိုင်ကြပါတယ်...
အားလုံးပဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကထိန်အလှူတော်မင်္ဂလာကြီး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားကြောင်း ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ကုန်ကျစရိတ်များ အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကို ခဏနေရင် တင်ပေးသွားပါဦးမယ်.
ကထိန် ပဒေသာပင်ဆင်ယင်ခြင်းနှင့် အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်းများ...
ပင်မ ပဒေသာပင် (သို့) ညှပ်မကြီး ပုံ
ကထိန်အတွက်ပြင်ဆင် ခင်းကျင်းထားတဲ့ ပဒေသာပင်ပုံလေးများနဲ့ ဒီနေ့ မနက်ခင်း ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ကထိန်အကြို အရုဏ်ဆွမ်းလောင်းလှူပွဲက ဓာတ်ပုံလေးတွေကို အားလုံးကြည်ညိုနိုင်အောင် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်.
* သုံးစွဲစာရင်း အသေးစိတ်ကို ထပ်မံဖော်ပြပေးပါဦးမယ်.
ဒီည ကထိန်ပဒေသာပင်ကိစ္စ အ၀၀တွေရယ်၊ မှောင်နေတဲ့ လမ်းလေးကို မီးချောင်းလေးတွေ လှူဖို့ ကိစ္စလေးတွေရယ်၊ ကထိန်စာရင်းဇယားလေးတွေကို ဒေါ်ဥမ္မာဌေးတို့၊ ကိုညီတို့နဲ့ ဆွေးနွေးနေတုန်းရယ်မှာ အမှတ်မထင်ဖြစ်ရပ်လေး တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.
ဦးဇင်းနဲ့ VZO မှာ Live လွှင့်ဖို့ ကင်မရာချိန်နေတုန်းပေါ့... အဲဒီ့မှာ ဦးဇင်းက ပြောပါတယ်.
မေတ္တာရှင် ဆရာတော် အခု ကြွလာမယ်တဲ့...
ဆွမ်းလောင်းအသင်းမှာ အင်တိုက်အားတိုက် ကူညီပေးနေတဲ့ ဒါယကာ ကိုထက်က ဦးဇင်း ဦးကောဝိဒဆီကို ဖုန်းဆက်ပြီး လှမ်းအကြောင်းကြားတာပါ..
အခု ၀ါးချက်မှာ ရောက်နေပြီတဲ့. အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုနဲ့ ကြွလာတာပါတဲ့....
အဲဒါနဲ့ ဦးဇင်းက ဆရာတော်ကို နေ့ဆွမ်းဘုဉ်းပေးဖို့ ပင့်တော့ ဆရာတော်က တစ်ခြားမှာ ဘုဉ်းပေးပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့ အကြောင်းပြန်ပါတယ်. ဒါပေမယ့် ကျောင်းတိုက်ကိုတော့ ကြွလာပြီး ကထိန်ခင်းတာကို လာကြည့်မယ်တဲ့...
အဲဒါနဲ့ ဦးဇင်းတို့လည်း ဆရာတော်အတွက် သစ်သီးတစ်ခုခု အမြန်စီစဉ်လိုက်ကြပါတယ်.
ခဏနေတော့ ဆရာတော် ကြွလာပါတယ်. ဦးဇင်းက VZO မှာ ချိန်ပေးပြီး
'ကိုရန်အောင်... ဆရာတော်ကို မြင်ရလား... မြင်ရလား..." လို့မေးတော့ ချက်ချင်း ဘာပြန်ပြောလိုက်ရမှန်း မသိပါဘူး.
'တင်ပါ့... မြင်ရပါတယ်.. ဆရာတော်ကို ဦးခိုက်လိုက်ကြောင်း လျှောက်တင်ပေးပါ" လို့ ဦးဇင်းက တဆင့် ပြန်လျှောက်လိုက်ရတယ်.
ကျွန်တော်လည်း ရုတ်တရက် ဆရာတော်ကို ဖူးလိုက်ရတာ ရင်ထဲမှာ အေးချမ်းသွားတာပါပဲ...
ဦးဇင်းက ကျွန်တော့်ကို ဆရာတော်နဲ့ VZO မှာ ချိတ်ပေးပါတယ်.
အဲဒီ့အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ ကျွန်တော် ဆရာတော့်ပုံကို ရအောင်ရိုက်ယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်.
ဆရာတော်က ကျွန်တော့်ပုံကို ကြည့်ချင်တယ်ပြောလို့ ကင်မရာပြန်ချိတ်နေတုန်းမှာပဲ ကျွန်တော့်စက်က ကံအကောင်းအကြောင်းမလှစွာနဲ့ ဟမ်းသွားပါတယ်.
စက်ကိုပြန်စနေချိန်မှာ ဖုန်းနဲ့ လှမ်းခေါ်တော့လည်း ချက်ချင်းမ၀င်... ရလည်းရရော ဆရာတော်က ပြန်ကြွသွားပါပြီတဲ့...
ကျွန်တော့်အတွက် မက်ဆေ့ခ်ျလေးတစ်ခု ထားခဲ့ပါတယ်တဲ့....
2:16 AM kall: ဒါယကာ
2:17 AM ဆရာတော်ကပြန်တော့မယ်
2:19 AM ကောင်းတဲ့အလုပ်ဆိုတာဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်အခက်အခဲရှိရှိအောင်မြင်အောင်လုပ်ပါ
ဆရာတော်က ကျွန်တော်တို့ စတင်ဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်မယ့် မေတ္တာရှင်ဖောင်ဒေးရှင်း အဖွဲ့လေးမှာ နာယကဆရာတော် တစ်ပါးအနေနဲ့ ပါဝင်ကူညီပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်း တစ်ဆက်တည်း အားလုံးကို ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာ အသိပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ဆရာတော် ကြွလာတာ အစီအစဉ်မရှိဘဲ ကတိုက်ကရိုက်ဖြစ်သွားခဲ့တာမို့ ဘယ်သူကမှလည်း ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတိမရလိုက်ကြပါဘူး... ကံမကောင်းစွာနဲ့ ကျွန်တော့်ဖက်က လိုင်းကျသွားခဲ့ပေမယ့်လည်း ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ လိုင်းမကျခင်လေးမှာ VZO camera လေးနဲ့ တစ်ပုံ ရအောင် ကျွန်တော် ရိုက်ယူလိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
အဲဒါလေးကို အားလုံးကြည်ညိုနိုင်အောင် ဝေမျှလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ...
ဆရာတော်အတွက် ဒကာဒကာမတွေက လှူဒါန်းပူဇော်ထားတဲ့ website လေးတွေမှာလည်း ဆရာတော့်အကြောင်း ပိုသိနိုင်အောင် လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကထိန်အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်းကို ဒီနေ့ စာရင်းပိတ်လိုက်ပါပြီ...
နိုင်ငံစုံက လှူဒါန်းသမျှကို ဒီပို့စ်လေးမှာ တင်ပေးထားပါတယ်.
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ့် အစီအစဉ်များကို တာဝန်ခံတွေ အချင်းချင်း တိုင်ပင်ပြီးရင် အသေးစိတ် တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်.
ဒီကနေ့ လွှဲပြောင်းပေးငွေကတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၇ နှင့် မြန်မာငွေ ကျပ် သုံးသိန်းဖြစ်ပါတယ်. ဒီထဲမှာ ကထိန်အတွက်သာမက ဆွမ်းလောင်းအသင်းအတွက် အလှူငွေတွေလည်း ရောပါနေပါတယ်. အဲဒါကို သီးသန့် စာရင်းပြုစုပေးထားပါတယ်.
အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် အလှူရေစက်လက်နှင့်မကွာ ဆက်လက်လှူနိုင်တန်းနိုင် ကုသိုလ်ပြုနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ...
မိမိတို့ ချွေးနှဲစာဖြင့် ကထိန် ပဒေသာပင်သီးနိုင်ပါပြီ...
ဒီတစ်ခါတော့ မောင်နှမတွေအားလုံး အတူတကွ ကုသိုလ်ပြု ပါဝင်နိုင်စေဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခုအကြောင်း ၀မ်းသာအားရ မျှဝေချင်ပါတယ်.
အဲဒါကတော့ ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ နေထိုင်နေကြတဲ့ ဘလော့ဂါတွေ၊ အွန်လိုင်း စာဖတ်သူတွေ၊ အဝေးမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရောက်နေကြပေမယ့် ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်ဌာနေရဲ့ လိုအပ်ချက်လေးတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ဖြည့်စွမ်းပေးချင်တဲ့ စေတနာရှင် မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံး ပါဝင်လှူဒါန်းနိုင်မယ့် ဘုံကထိန်အလှူတစ်ခု ပြုလုပ်လှူဒါန်းမယ့် အစီအစဉ်ပါပဲ.
တကယ်တော့ ဒီကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူဖို့ အစီအစဉ်ဟာ မရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါ. တစ်ရက်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာ အခမဲ့ ပညာဒါန သင်တန်းတွေ သင်ကြားပေးနေတဲ့ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒတို့ ဆွမ်းလောင်းအလှူကိစ္စနဲ့ တစ်ခြားကိစ္စတွေ ဆွေးနွေးနေရင်းနဲ့ ကထိန်အလှူအကြောင်း စကားစပ်မိသွားခဲ့ပါတယ်.
အဲဒါနဲ့ပဲ ဦးဇင်းတို့ ကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်သင်္ကန်းအလှူရှင် ရှိနေပြီလားလို့ ကျွန်တော်မေးလျှောက်လိုက်ပါတယ်. ဦးဇင်းက မရှိသေးပါဘူးလို့ မိန့်တော့ ကျွန်တော်လည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ပဲ တပည့်တော်တို့ ဦးဇင်းကျောင်းတိုက်မှာ ဘုံကထိန်ခင်းပါရစေလို့ လျှောက်တင်လိုက်ပါတယ်.
ဦးဇင်းက ပြန်မိန့်ပါတယ်. သေချာရဲ့လားပေါ့. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကထိန်ဆိုတာ ကျောင်းတိုက်တစ်ခုမှာ တစ်ကြိမ်ပဲ လက်ခံကျင်းပခွင့် ရှိတာမို့လို့ပါတဲ့. အလှူရှင်တစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီက ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူမယ်ဆိုတဲ့ ကတိက၀တ် ရထားပြီးရင် နောက်ထပ် ဘယ်သူ့ဆီကမှ ထပ်မံပြီး အလှူမခံနိုင်တော့ပါဘူးတဲ့…
အဲဒီ့ အခိုက်အတန့်မှာ ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ထိတ်ခနဲတော့ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်သွားမိပါသေးတယ်. “ငါကတော့ လျှောက်တင်လိုက်ပြီ. တော်ကြာမှ အစီအစဉ်မဖြစ်မြောက်ရင် မကောင်းချေဘူး” လို့လည်း ပူပန်မိလိုက်ပါသေးတယ်.
ဒါပေမယ့် ချက်ချင်းပဲ အားတင်းပြီး ပြန်လျှောက်လိုက်ပါတယ်.
“တပည့်တော်တုိ့ကို ဦးဇင်းကျောင်းတိုက်မှာ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူခွင့်ပြုပါ” လို့ ကျွန်တော် ထပ်မံပြီး အာမဘန္တေခံလိုက်ပါတယ်.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးမှာ ပညာဒါနသင်တန်းတွေကို ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က စေတနာရှင် မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပံ့ပိုးပေးမှုနဲ့ အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပြီ. ဒါတင်မက အပတ်စဉ် တနလာင်္နေ့တိုင်းမှာလည်း ဆွမ်းလောင်းအသင်းက သံဃာတော်တွေ၊ သီလရှင်တွေကို အရုဏ်ဆွမ်း၊ နေ့ဆွမ်းစသည်ဖြင့် ကပ်လှူနေနိုင်ခဲ့ပြီ.
ဒီ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူခွင့်ဆိုတာ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါ၊ တစ်ခါမှ တစ်ကျောင်းတည်းကိုသာ ကပ်လှူရတာမို့ အင်မတန်မှကို ကြုံတောင့်ကြုံခဲ အခွင့်အရေးကြီး ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ဒီအခွင့်အရေးကြီးကို မလွတ်တမ်း ရယူချင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ချည်းသာမကပါဘူး. ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ ရှိနေကြတဲ့ မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံး ပါဝင်ကုသိုလ်ယူနိုင်အောင် စီစဉ်မယ်လို့လည်း ရည်ရွယ်ထားပါတယ်… ဒါကြောင့်လည်း ရဲရဲကြီး အာမခံလို့ ကထိန်အလှူကို လှူဒါန်းခွင့် လျှောက်တင်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ဒီစာလေးကတော့ ဦးဇင်းဦးကောဝိဒကို အကူအညီတောင်းလို့ ပြန်ရှင်းပြထားတဲ့ ကထိန်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ နောက်ကြောင်းလေးနဲ့ ကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူရခြင်း အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
ပါဝေယျကတိုင်းနေ ဘဒ္ဒ၀ဂ္ဂီ ရဟန်း(၃၀)တို့ မြတ်စွာဘုရားအားဖူးမြင်ရန် သာဝထ္ထိပြည်ကိုလာပါတယ်။ သာဝထ္ထိကိုဝါဆိုအမှီမရောက်နိုင်တဲ့အတွက် သာကေတမြို့မှာ ၀ါကပ်ကြတယ်။ မြတ်စွာဘုရားနှင့် ခြောက်ယူဇနာပဲဝေးတယ်။ ဒါပေမဲ့မဖူးရဘူး လို့ကြံပြီး ရဟန်းတော်တွေဟာ ရောက်ရှိနေတဲ့ သာကေတမြို့မှာပဲ ၀ါကပ်ကြရပါတယ်။ ၀ါကျွတ်လို့ပ၀ါရဏာပြုပြီးတဲ့အခါမှာ မိုးတွေရွာတယ်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာရေတွေပြည့်ပြီးရွံ့ညွှန်တွေဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုမိုးရေတွေ ညွန်တွေကြားကနေဘုရားဖူးသွားကြတော့ ရဟန်းတော်တွေရဲ့သင်္ကန်းဟာရေတွေရွဲစိုိပြီး ညွန်တွေပေနေပါတယ်။ ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ကို လာခဲ့ရတာပါ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ သိမြင်ရတော့ဒီရဟန်းတော်တွေကို အကြောင်းပြုပြီး ကထိန်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်။
(၀ိ ၊ ၃ ၊ ၃၅၁)
မြဲမြံခိုင်ခံ့ခြင်းရှိလို့ ကထိန်ခေါ်ရပါတယ်။ ဘာကြောင့်မြဲမြံခိုင်ခံ့သလဲဆိုရင် ကထိန်အာနိသင်(၅)ပါးကို မိမိအတွင်းမှာ သိမ်းစည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
ကထိနန္တိ ပဉ္စာနိသံသေ အန္တောကရဏသမတ္ထတာယ ထိရန္တိအတ္တောတိ လိခိတံ၊
လေးပါးမှစ ဂိုဏ်းဂဏအား၊ အကပ္ပိယ၀စနဖြင့် လှူကြဖိတ်ကြ၊ ဘောဇဉ်များကို၊ လေးပါးအတူခံယူ နိုင်ခြင်းလည်းကောင်း။
ကထိန်ခင်းရာကျောင်းတိုက်၌ ဖြစ်ပေါ်သောသင်္ကန်းသည် ကထိန်ခင်းသော ရဟန်းတို့အတွက်ဖြစ်ခြင်း
(၀ိ ၊၃ ၊၃၅၂)
၁။တားဆီးကင်းကွာ ၊လွတ်လပ်စွာ ၊ လိုရာသွားနိုင်သည်။
၂။တာဝန်ကိစ္စ ၊ မလေးရ၊ ပေါ့လှလေတော့သည်။
ကထိန်အလှူကို တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ည နောက်ဆုံးထားပြီး ကပ်လှူနိုင်ပါတယ်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ ကထိန်အလှူမှာ ရန်ကုန်က စေတနာရှင်တစ်ချို့ကိုယ်တိုင် သွားရောက်ပြီး ကမကထ ကြီးကြပ်စီစဉ်ပေးရမှာမို့ သူတို့ အလုပ်နဲ့ အဆင်ပြေမယ့် ရက်ကို ညှိပါတယ်. ဦးဇင်းကလည်း တနလာင်္နေ့ဆွမ်းလောင်းအသင်းသားတွေကို ပါဝေစေချင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက် (တနင်္လာ) နဲ့ ၂၀ ရက်(အင်္ဂါနေ့)ကို ကထိန်ခင်းမယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်.
နှစ်ရက်သတ်မှတ်ရတာကတော့ တစ်ရက်မှာ ကထိန်ပဒေသာပင်တွေကို ဆင်ယင်ပြီး ခင်းကျင်းပြသထားပါမယ်. ဓာတ်ပုံ၊ ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ ရိုက်ယူပြီး အားလုံးကြည်ညိုနိုင်အောင် ဘလော့ဂ်တွေ၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ တင်ထားပါမယ်. ၂၀ ရက်နေ့မှာ အားလုံးအတူတကွ တရားနာ ရေစက်ချကြပါမယ်. ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကနေ တိုက်ရိုက်ကြည်ညိုနိုင်အောင် Live လွှင့်ပေးနိုင်ဖို့လည်း စီစဉ်ပေးသွားပါမယ်.
မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေကြတဲ့ စေတနာရှင်များအနေနဲ့လည်း ငွေအားသာမက လူအားပါ ကူညီပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ.
အဓိကလိုအပ်ချက်ကတော့ နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးပဲ ဖြစ်ပါတယ်. သူက သင်္ကန်းအနေနဲ့ ရုံလို့လည်းရတယ်. အေးလို့ ခြုံတဲ့အနေနဲ့လည်း အသုံးပြုလို့ရတယ်. အဲဒါပါရင် ကထိန်ဟာ ပြီးမြောက်ပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်. ကျန်တာတွေကတော့ အလှူရှင်တွေရဲ့ စေတနာ သဒ္ဒါတရား ထက်သန်မှုအလျောက် ချဲ့ကားလှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်လို့ ဦးဇင်းက မိန့်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ပြီးတော့ ကထိန်အတွက် ပဒေသာပင် သီးရာမှာ “ညှပ်မကြီး” ဆိုတာ ရှိပါတယ်. ဆိုလိုတာကတော့ ပဒေသာပင်တွေထဲမှာ အကြီးဆုံးကို ဆိုလိုတာပါ. အဲဒီ့ပဒေသာပင်တိုင်တွေကိုလည်း ငှားရပါသေးတယ်.
ဦးဇင်းက ဘယ်နှစ်ပင်သီးချင်ပါသလဲမေးတော့ ကျွန်တော်လည်း ညှပ်မကြီးကို ဦးထိပ်ထားပြီး လေးဖက်လေးတန် ကာရံမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ ငါးပင်သီးမယ်လို့ အကြောင်းပြန်လိုက်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကထိန်အလှူမှာ ညှပ်မကြီး အပါအ၀င် အရံလေးပင်. စုစုပေါင်း ငါးပင်သီးပါမယ် ခင်ဗျာ…
ကထိန်အလှူအတွက် အထွေထွေ ပစ္စည်းများစာရင်း
ဒီစာရင်းလေးကတော့ ရန်ကုန်က ဒေါ်ဥမ္မာဌေးကိုယ်တိုင် လိုက်လံစုံစမ်းပြုစုပေးထားတဲ့ စာရင်းဖြစ်ပါတယ်.
ဒီမှာ နည်းနည်းလေးလောက် ရှင်းပြချင်ပါတယ်.
နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးဈေးနှုန်းက တစ်သောင်းကနေ ငါးသောင်းခွဲထိ အစားစားရှိပါတယ်. အဲဒီ့မှာ ငါးသောင်းခွဲတန်ကြီးပဲ လှူမယ်ဆိုပြန်ရင်လည်း တစ်ခြားလှူဖွယ်ပစ္စည်းတွေ အတွက် မလောက်ငှမှာစိုးရသလို တစ်သောင်းတန်ချည်းပဲ လှူမယ်ဆိုပြန်တော့လည်း အမျိုးအစားညံ့မှာ စိုးရိမ်မိပါတယ်. ဒါကြောင့် အလယ်အလတ်အနေနဲ့လည်း ဖြစ်မယ်. အားလုံးလည်း တစ်ပြေးညီ ဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ အနေနဲ့ သုံးသောင်းတန်လောက်ကို Standard အနေနဲ့ သတ်မှတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ.
အလားတူပဲ ဒွိစုံသင်္ကန်း၊ ထီး၊ ဖိနပ်၊ ဆပ်ပြာ၊ တံမြက်စည်း စသည်တို့ကိုလည်း ကောက်ခံရရှိလာမယ့် အလှူငွေပမာဏပေါ်မူတည်ပြီး အချိုးချရမှာမို့ ကျန်တာတွေကိုတော့ ဘာတွေပါဝင်လာနိုင်မယ် ဆိုတာ အတိအကျ မပြောပြနိုင်တာ နားလည်ပေးနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. စုံနိုင်သလောက် စုံအောင်တော့ ကြိုးစားဖြည့်စွက်ပေးသွားပါမယ်.
ကျွန်တော်တို့ အလှူငွေကို အဓိကကောက်ခံပါမယ်. ပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုတော့ တာဝန်ခံတွေရယ်၊ ကျွန်တော်တိုိ့ကို ကြီးကြပ်ကူညီပေးမယ့် ဝေယျာဝေစ္စအဖွဲ့တွေရယ်နဲ့ တိုင်ပင်ညှိနှိုင်းပြီး ဆရာတော်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ကြည့်လို့ ဖြည့်စွက်ဝယ်ယူလှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
ဆရာတော်တွေအတွက် ၀တ္ထုငွေကိုတော့ ရေစက်ချအလှူမှာ တစ်ခါတည်း စာအိတ်ထဲထည့်ပိတ်လို့ ကပ်လှူမယ်လို့လည်း ရည်ရွယ်ထားပါတယ်.
ကထိန်ဟာ သီလရှင်ဆရာလေးတွေနဲ့ မပတ်သက်မအပ်စပ်ပါဘူး. ဒါပေမယ့် ဆရာလေးတွေက ကထိန်အလှူအတွက် ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရာမှာ လာရောက်ကူညီ လုပ်အားဖြည့်ပေးကြမှာ ဖြစ်လို့ သူတို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဖက်က တတ်နိုင်သလောက်လေး စေတနာရှိသလောက် တုံ့ပြန်လှူဒါန်းချင်ပါတယ်.
သူတို့အတွက် တဘက်လေးတွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်. ကိုယ်ရုံအ၀တ်လေးတွေလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်. အလှူရှင်တွေရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလေးတွေကိုလည်း သိခွင့်ရချင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ပင့်သံဃာများနှင့် ခန့်မှန်းသော လူပရိသတ်
ဆရာတော်ကြီးတွေက ၁၅ ပါးပင့်ပါမယ်. ဦဇင်းကျောင်းတိုက်မှာ ၃ ပါးသီတင်းသုံးနေပါတယ်. ဒါကြောင့် စုစုပေါင်း သံဃာ ၁၈ ပါး ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျာ. လူပရိသတ်အနေနဲ့ကတော့ ဆွမ်းလောင်းအသင်း ဝေယျာဝစ္စအသင်းသားတွေနဲ့ လုပ်အားဒါန ကုသိုလ်ရှင်တွေအပါအ၀င် ၂၅ ယောက်ကနေ ၃၅ ယောက်လောက်ထိ ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းပါတယ်.
ကုန်ကျစရိတ်တွေကို ကျွန်တော်တို့ သေချာတွက်ချက်ပြီး ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါမယ်..
ကထိန်ရက်ကို နီးမှ စီစဉ်လိုက်ရတာမို့ ကျွန်တော်တို့ဖက်က ဟာကွက်တစ်ခုလို့ ဖြစ်သွားရတာကိုလည်း ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ….
ကထိန်အတွက် အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်း
ဘုံကထိန်ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုက အားလုံး စုပေါင်းစပ်ပေါင်း ပါဝင်လှူဒါန်းကြခြင်းဆိုတဲ့ သဘောတရားပါဝင်နေပါတယ်. ဒါကြောင့် ဘုံအနေနဲ့ပဲ အလှူငွေကို ထည့်ဝင်နိုင်ပါတယ်. နည်းသည်များသည်မဟူ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ကြပေမယ့် စေတနာရှင်တွေကို ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေလိုပါဘူး.
ဒါကြောင့် Standard အနေနဲ့ တစ်ယောက်ကို အနည်းဆုံး ၅ ဒေါ်လာ ထည့်ဝင်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်. အဲဒီ့ အထက်ကို ကိုယ်စေတနာ ရှိသလောက် လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်. အောက်တိုဘာ (၁၅) ရက်နေ့ ညနေ နောက်ဆုံးထားပြီး လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်. နေ့စဉ် ကောက်ခံရရှိတဲ့ အလှူရှင်စာရင်းကို ထုတ်ပြန်ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်.
အလှူငွေတွေကို အောက်ပါတာဝန်ခံများဆီ လွှဲပေးနိုင်ပါတယ်.
ရွာသားလေး YTU (donationformyanmar@gmail.com)
လှပသော ခြေလှမ်းတစ်စုံ သူ့ရှေ့ လာရပ်သည်ကို သူမက်မောလွန်းစွာ ငေးကြည့်နေခဲ့မိသည်. ပြီးတော့ သူမ သူ့ကို တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်သည်. သုိ့မဟုတ် လှမ်းကြည့်လိုက်သည်ဟု သူထင်မိလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နေနိုင်သည်. သုိ့မဟုတ် သူ့စိတ်ထဲက သူမကို လှမ်းကြည့်လိုက်စေချင်တာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်. သူမအကြည့်က တဒင်္ဂလောက်ပဲ ကြာမည်ထင်သည်. သေချာသည်ကတော့ သူ့ရင်ခုန်သံ နည်းနည်းမြန်သွားခဲ့သည်ကိုတော့ သူသတိထားမိလိုက်သည်.
ထိုနေ့က သူထင်ထားခဲ့သလို မိုးမရွာနေခဲ့ပါ. နေရောင်ခြည် ကျိုးတိုးကျဲတဲက သူ့လက်ချောင်းလေးများကြားထဲသို့ ထိုးခွဲဝင်ရောက်လာသည်ကို မနှစ်မြို့လွန်းစွာ ကြိုးစားပိတ်ကာရင်း သူမမျက်နှာနုနုလေးပေါ်သို့ နေရောင်ခြည် မကျရောက်စေရန် သူကာပေးလိုက်သည်. အရိပ်နည်းနည်းကျသော နေရာတွင် ခေါင်းငုံ့ကာ စာဖတ်နေသော သူမတစ်ယောက်ကတော့ သူအလုပ်များနေခဲ့သည်ကို သိဟန်ပင်မတူ… သို့မဟုတ် သူမအတွက် သူသည် ဖြစ်တည်မှုမရှိသော မြင်တွေ့နိုင်စွမ်းမရှိသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ခဲ့သည်. သေချာသည်ကတော့ သူမအတွက် သူကာကွယ်ပေးရသည်ကို သူနှစ်သက်နေမိသည်ကို သူသတိထားမိလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်…
ကျေးငှက်ကလေးများက စိုးစီစိုးစီ သီကျူးနေကြသည်. ကျီးကန်းတစ်ကောင်က ခပ်လှမ်းလှမ်းက သစ်ပင်ပေါ်တွင် နားလျက် တအာအာ မြည်တွန်နေသည်. ဟိုင်းဝေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ယာဉ်ကြီးယာဉ်ငယ်များက တ၀ီဝီဖြင့် ဥဒဟို သွားလာလှုပ်ရှားနေကြသည်. ဘိုးအင်းဂျက်လေယာဉ်ပျံကြီးတစ်စင်း တ၀ုန်းဝုန်း တဝေါဝေါ ဟစ်ကြွေးလျက် တိမ်လွှာထုထဲ ထိုးခွဲဝင်ရောက်သွားခဲ့သည်.
မည်သည့်အသံကမျှ သူမ၏ အာရုံစူးစိုက်မှုကို စိန်ခေါ်လှုပ်ရှားနိုင်စွမ်း ရှိခဲ့ဟန်မထင်. နားကြပ်အဖြူရောင်လေးကို ဖက်ရှင်ကျလွန်းစွာ နားနှစ်ဖက်မှာတပ်ပြီး ခုံတန်းလျားလေးပေါ်တွင်ထိုင်လျက် စာမျက်နှာတစ်ခုကို ခေါင်းငုံ့ကာစိတ်ဝင်တစား ဖတ်နေသော သူမနဖူးပေါ် ၀ဲကျနေသည့် ဆံနွယ်လေးများကို သွားပြီး သပ်တင်ပေးလိုက်ချင်သည်… ပါးပြင်မို့မို့ပေါ်တွင် ယှက်သန်းနေသော အကြောစိမ်းစိမ်းလေးများကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းရှိုက်ချင်သည်. လှပလွန်းစွာ သွယ်ဆင်းသွားသော နှာတံစင်းစင်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်းဖျားလေးဖြင့် တို့ထိကစားချင်သည်. လေးကိုင်းသဏ္ဌာန် ကွေးဆင်းသွားသော သူမ အပြုံးရှင်းသန့်သန့်လေးကို သူ့ရင်ထဲ ထာဝရ သိမ်းထားခွင့် ရချင်သည်.
တကယ်တော့ သူမက ရွေ့လျားသွားလာနိုင်စွမ်းသော သက်ရှိတစ်ယောက်. သူကတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်သော သက်ရှိတစ်ယောက်. ဒီလောက်ထိ ဘ၀ခြင်း ခြားနားလွန်းခဲ့ပေမယ့်လည်း သူမအပေါ် သူ သံယောဇဉ်ဖြစ်မိသည့်အတိုင်းအတာကတော့ မည်သည့်အရာနှင့်မျှ တိုင်းတာ၍ပင် ရနိုင်မည်မထင်ချေ…
တိုက်တစ်လုံးအကွယ်မှ သူမလှုပ်ရှားသမျှကို ငေးမောကြည့်ရှုရင်း ရင်ခုန်လွမ်းမောနေရသော သူ့ဘ၀ကို သူမ စာနာနားလည်ပေးနိုင်မည့် တစ်နေ့ကို မရဲတရဲဖြင့် သူမျှော်လင့်လွမ်းမောနေခဲ့ရသည်. သို့သော် သူမကတော့ဖြင့် သူ့အဖြစ်ကို သိဟန်လည်းမတူ. သိဖို့လည်း ကြိုးစားမည်မထင်ဟု တွေးကာ စိတ်ပျက်အားလျော့စွာ နံရံကို မှီလျက် အသာအယာ ထိုင်ချမိလိုက်သည်. သူ့ခြေထောက်တွေ ဘာလို့ လမ်းလျှောက်ခွင့်မရတာလဲဟု အသံကုန်အော်ဟစ် ငိုကြွေးလိုက်ချင်သော်လည်း ဆန္ဒတို့က လည်ချောင်းဝတွင်ပင် တစ်ဆို့ပျောက်ကွယ်သွားကြသည်… နံရံကို ခေါင်းဖြင့်ဆောင့်လျက် ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် သူ ရှိုက်ကြီးတငင် ငိုပစ်လိုက်သည်… ရင်အစုံတို့ နိမ့်ချည်မြင့်ချည်ဖြင့် မောဟိုက်လာကြသည်. နံရံဖက်သို့ သူ့မျက်နှာကိုကပ်လျက် သူ့လက်ချောင်းများကို နံရံပေါ်တွင် ကပ်ထားလိုက်သည်.
နံရံကြားမှ ရေစက်တစ်ပွင့်က သူ့လက်ကြားထဲသို့ ဖြတ်စီးသွားသည်. ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ကျဆင်းသွားသော ရေစက်ပွင့်လေးကို ငေးကြည့်လျက် သူ ပြန်အားတင်းလိုက်သည်.
‘အနည်းဆုံးတော့ ငါ သူ့ကို မြင်တွေ့ခွင့်ရနေသေးတာပဲ. သူ့အတွက် ငါလုပ်ပေးနိုင်တာလေးတွေ လုပ်ပေးနေနိုင်သေးတာပဲ. ချစ်တယ်ဆိုတာ တစ်ဖက်လူ သိအောင်ပြဖို့ထက် ကိုယ်တိုင်ကိုက လိုလိုလားလား ဖြည့်စွမ်းပေးချင်တဲ့ ဆန္ဒတစ်ခု ဖြစ်ရင် ပိုမကောင်းဘူးလား.. ဟုတ်တယ်. အနည်းဆုံးတော့ ငါသူ့ကို င့ါအတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့ ဆက်ချစ်ခွင့် ရနေသေးတယ်…’
ဆတ်ခနဲခါထုတ်လိုက်သော သူ့ဆံနွယ်များကြားမှ ရေစက်တစ်ပွင့် လွင့်စင်သွားခဲ့သည်. ဖွာလန်ကြဲနေသော သူ့ဆံပင်များကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်အောင် အသာအယာဖိလိုက်ပြီး စာဖတ်နေသော သူမထံသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သည်.
အရပ်ရှစ်မျက်နှာသို့ ယောက်ယက်ခက်လွန်းစွာဖြင့် သူလိုက်ကြည့်မိသည်…
လှေကားပေါ်သို့ ဖျတ်လတ်စွာဖြင့် ပြေးတက်သွားသော သူမနောက်ကျောလေးကို ၀မ်းနည်းတသစွာ ငေးကြည့်ရင်း သူမထိုင်သွားသော ခုံတန်းလျားလေးပေါ်သို့ နောက်ပြန်လှဲချလိုက်သည်.
‘နှုတ်ဆက်ခွင့်လေးတောင် မရလိုက်ပါလား ချစ်သူရယ်….’
ခပ်လှမ်းလှမ်းတိုက်လေးတစ်လုံးမှ အခန်းလေးတစ်ခန်းကို သူငေးကြည့်နေခဲ့သည်မှာ အချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီထင်သည်…
မြို့ထဲမှ နာရီစင်ကြီးထဲက ချိန်သီးက သုံးချက်တီးလိုက်သံကို သူကြားလိုက်သည်.
‘နာရီစင်က သုံးချက်တီးသံမြည်….. နှင်းတွေလည်း ကျနေသည်… ဒီဆောင်းမြောက်လေ မြူးသည်… ခုတော့သိပြီ.. မင်းကို ကိုယ်ချစ်သည်….’
သူ့ရှေ့တွင် ရှိနေသော မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးတွင် တွဲခိုနေသည့် ရေစက်လေးများကို ငေးကြည့်ရင်း သီချင်းစာသားတစ်ခုကို ခပ်တိုးတိုး သူရေရွတ်နေခဲ့မိသည်…
‘နောက်ထပ် နှစ်နာရီ ထပ်စောင့်ရဦးမယ်….’
ညဉ့်နက်နက်တွင်မှ ပုစဉ်းရင်ကွဲတို့က အလိုက်မသိလွန်းစွာ မြည်ကြွေးနေကြသည်.
သူ့နားနှစ်ဖက်ကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ပိတ်လျက် အုတ်ခုံပေါ်တွင် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေလိုက်သည်. သို့သော် ကြာကြာတော့ မထိုင်နိုင်. ကြာတော့လည်း စိတ်ပျက်လာပြီး ပုစဉ်းရင်ကွဲတစ်ကောင်နှင့်တစ်ကောင်ကြားက လစ်ဟာသွားသော အချိန်လေးများကို နရီတစ်ခုအဖြစ် မှတ်ယူကာ သံစဉ်တစ်ခုကို စိတ်ကူးဖြင့် ဖန်တီးနေခဲ့လိုက်သည်.
ဖျတ်ခနဲ မီးပွင့်လေးတစ်ပွင့် ပွင့်သွားသည်ကို သူ့စိတ်က အတပ်သိလိုက်သည်.
ခေါင်းကို ဆတ်ခနဲ မော့ကြည့်လိုက်တော့ သူ့အထင်မမှားသည်ကို သိလိုက်ရသည်. ရင်ခုန်သံတို့ ပိုမြန်လာသည်…
သူမ အခန်းလေးရှိရာဖက်သို့ လှမ်းမျှော်ကြည့်ရင်း စိတ်ကူးဖြင့် တွေးတောနေခဲ့မိသည်.
အခုအချိန်လောက်ဆို သူမ မျက်နှာသစ်နေလောက်ပြီ. ရေချိုးနေလောက်ပြီ. အ၀တ်လဲနေလောက်ပြီ. ကော်ဖီသောက်နေလောက်ပြီ. မုန့်စားနေလောက်ပြီ….
သူ ရူးနေပြီဟု ထင်မိသည်…
နံနက်ခင်းလေပြည်အေးတစ်ချက်အဝေ့တွင် ဟက်ဟက်ပက်ပက် ရယ်မောလိုက်သော သူ့ရယ်သံတစ်ခု လွင့်မျောစီးဆင်းသွားသည်…
သံဘာဂျာတံခါးတစ်ခု ဆွဲဖွင့်လိုက်သံကို ကြားလိုက်သည်.
သူ့ရင်ခုန်သံတို့က အတိုင်းအဆမသိ မြန်လာခဲ့သည်… ခြေဖျားလက်ဖျားတို့က ရုတ်ချည်းအေးစက်လာခဲ့သည်…
ဒီအချိန်ကြီး သူမကိုစောင့်နေသော သူ့ကို တွေ့လျှင် သူမ ဘာပြောမည်လဲ. လန့်သွားမည်လား. သို့မဟုတ် မနှစ်မြို့လွန်းစွာဖြင့် တစ်ချက်မေးငေါ့မည်လား. သို့မဟုတ်. သနားစရာဖြစ်ရပ်တစ်ခုလို့ပဲ သဘောထားပြီး ခေါင်းလှည့်ထွက်သွားမည်လား.
သူမ မီးတိုင်လေးကို ကွေ့ပတ်လျှက် ကျောက်စရစ်ခဲလေးများစီထားသော လမ်းကလေးကို အသာအယာနင်းလျှောက်လာသည်…
တဖြည်းဖြည်း သူ့အနားကို ရောက်လာသော သူမ၏ လှုပ်ရှားမှုမှန်သမျှကို မလွတ်တမ်းငေးမောကြည့်ရင်း သူမကို သူ ဘယ်လိုနှုတ်ဆက်လိုက်ရမည်လဲဟု အလျှင်အမြန်တွေးတောလိုက်သည်…
အမှောင်ထဲတွင် ထိုင်နေသော သူ့အနားသို့ သူမ ရောက်လာသည်ကို အသက်ရှူရပ်မတတ် သူလိုက်ကြည့်နေခဲ့မိသည်…
သစ်ပင်တစ်ပင်နောက်ကွယ်သို့ သူ အမြန်ပြေးကပ်လိုက်သည်.
သူမ သူ့ရှေ့နားမှ ဖြတ်လျှောက်သွားသည်. လက်ထဲတွင်ကိုင်ထားသော ဖိုင်တွဲအနက်ရောင်လေးကို သ၀န်တိုစွာဖြင့် သူငေးကြည့်နေခဲ့မိသည်.
ဟော… သူမ သူ့အရိပ်ထဲက ထွက်သွားတော့မည် ထင်သည်…
လှပသော ပန်းလေးတစ်ပွင့် သစ်ကိုင်းလေးများကြားထဲမှ ဝေ့၀ဲလျက် သူမရှေ့သို့ အသာအယာ သက်ဆင်းသည်…
သူမ ခြေလှမ်းတို့ တုံ့ခနဲ ရပ်ဆိုင်းသွားသည်…
ထို့နောက် ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ အပြစ်ကင်းစွာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ပြုံးလျက် ပန်းပွင့်လေးကို ကောက်ယူလိုက်သည်.
ခပ်တိုးတိုး ပြောလိုက်သော သူမ၏ စကားလုံးလေးများက သူ့ရင်ဘတ်ထဲသို့ အဆီးအတားမရှိ ပြေးဝင်တိုးခတ်သည်...
သူမဆံနွယ်လေးကြားထဲတွင် ၀င့်ကြွားစွာ လိုက်ပါသွားသော ပန်းပွင့်လေးကို ငေးကြည့်လျက် ခုံတန်းလျားလေးပေါ်တွင် စိတ်ဖြေလျှော့ကာ သူထိုင်ချလိုက်သည်….
ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ဒီခုံတန်းလျားလေးပေါ်မှာ စာလာဖတ်နိုင်ပါစေလို့ ကျွန်တော်ဆုတောင်းရင်း တမ်းတလွမ်းဆွတ် နေပါ့မယ်...
ဒီနေရာလေးမှာ ကျွန်တော် အမြဲ ရှိနေမယ်....
I miss you soooo much…
အဆောက်အဦးတစ်ခုထဲမှ မိန်းကလေးတစ်ယောက် ထွက်ခွာသွားချိန်တွင် သူမ အိမ်ရှေ့မှ သစ်ပင်လေးတစ်ပင် အသံတိတ် လွမ်းဆွေးနေခဲ့သည်ကို မည်သူကမျှ သိနိုင်ခဲ့မည်မထင်…